मौन सरकार, आज्ञाकारी राखेप, ढुक्क संघ र आक्रोशित खेलाडीहरू « Khabarhub
मौन सरकार, आज्ञाकारी राखेप, ढुक्क संघ र आक्रोशित खेलाडीहरू
काठमाडौँ– केही दिनको एक भर्चुअल कार्यक्रमका एक वक्ताले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव समक्ष प्रश्न तेर्स्याए– यति लामो समयदेखि खेलकुद ठप्प छ, कहिले र कसरी सुचारु होला ?’
मिठो बोल्न सिपालु राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले जवाफमा भने, ‘अहिले राजधानीमा कोरोना भाइरसको कहर बढ्दो क्रममा छ । केही समय पर्ख र हेरको अवस्था छ ।’
त्यसो त, सदस्य सचिव सिलवालको यस्तो भनाइ नयाँ होइन । उनलाई खेल गतिविधि सुरु हुनेबारे सोधिने हरेकजसो प्रश्नमा यस्तै प्रकारको जवाफ आउँछ । गत फागुन र भदौमा गरी दुई पटक राखेपले खेलकुद गतिविधि रोक्न पत्र काटेको थियो । यसबीचमा ‘अब खेलकुद गतिविधि गर्न सकिन्छ,’ भनेर खेलाडीलाई अभ्यासमा फर्काउन संघहरूलाई निर्देशन दिन सकेको छैन ।
राखेपको तालुकदार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खेलाडीलाई मैदान फर्काउने विषयमा मौन छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले उल्टै प्रश्न गरे, ‘नेपालको अवस्थामा अहिले खेलकुद गर्न सकिन्छ र ?’
राखेप सरकारले खेल गतिविधि रोक्न दिएको निर्देशन पालनामा आज्ञाकारी छ । सदस्य सचिव सिलवालले त्यही भर्चुअल कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘म दुई भूमिकामा रहेर सोचिरहेको छु, खेलाडीलाई मैदानमा फर्काउने र सरकारले दिएको निर्देशन पालना पनि गर्ने ।’ उनी अझै सोच्दै छन् ।
संघहरू पनि कानमा तेल हालेर सुतिरहेका छन् । उनीहरूका लागि कोरोना भाइरस खेलाडीसँग टाढिएर बस्न गज्जबको बहाना बनेको छ । नेपाली खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि खेल संघमा आएका पदाधिकारीहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा कसरी दिन बिताइरहेका छौ भनेर खेलाडीलाई कति पटक फोन गरे ? खेलाडीहरू भन्छन्, ‘अहिलेसम्म संघका मान्छेहरूसँग सम्पर्क भएको छैन ।’
फूटबल कप्तानको आक्रोश
फागुनदेखि ठप्प खेलकुदबारे सरकार मौन बसिरहेकै बेला नेपाली राष्ट्रिय फूटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले सरकार र राखेपलाई सम्बोधन गर्दै खुला पत्र लेखेका छन् ।
उनले पत्रमा खुलेर खेल प्रशासनको आलोचना गरेका छन् । पछिल्लो सात महिनामा अर्को कुनै खेलाडीले यसरी आवाज उठाएको थिएन । किरणको आक्रोश मिश्रित खुला पत्रलाई अधिकांश खेलप्रमीले समर्थन गरेका छन् । किरणको प्रशंसा गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
किरणले खेल पदाधिकारीहरूलाई पत्रमा लेखेका छन्- ‘फूटबल मात्रै नभएर सम्पूर्ण खेलकुद सुचारु गर्न सबै मापदण्ड पूरा गरी पूर्ण सुचारु गर्न हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु । एककान दुईकान गर्दै हुनुहुन्छ ? के खेलाडी सधैँ मारमै पर्नु पर्ने र मर्ने हो भने तपाईंहरू सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरूको के अर्थ रह्यो र ? खेलाडी चैँ सधैँ काठमाडौँको धुलोमा, तपाईंहरू चै चिलो गाडीमा ?’
यसरी खेलकुद परिषद् र राखेपसँग ठाडो प्रश्न गर्न सक्ने आँट किरणले गरेका छन् । वर्षौं मिहिनेत गरेको खेलाडी कोरोना भाइरसकै कारण सात महिनाभन्दा बढी घरमा थन्केर बसेको छ अनि सरकारले मुखमा मास्क लगाएको छ। पदाधिकारीहरू झन् ढुक्क र शान्त देखिएका छन् ।
एक खेलाडीको प्रश्न छ, ‘मैदानमा खेलेर घर परिवार पाल्नुपर्ने खेलाडीलाई कोरोनाको बहानामा बन्धक बनाएर कहिलेसम्म आनन्दको निन्दा लाग्छ सरकार ?’
पौने दुई सय संघ
राष्ट्रिय संघहरूले खेलाडीका बारेमा सोच्नुपर्ने हो । खेलाडीहरू घरमा कसरी बसेका छन् र यसले अभ्यासमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो ।
केही सीमित संघ बाहेक अन्यलाई खेलाडीका बारेमा कुनै चासो र चिन्ता छैन । नेपालमा १७२ वटा खेल संघ छन् । लामो समय घरमा बस्दा खेलाडीमा शारीरिक, मानसिक र सामाजिकरूपमा नकारात्मक असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एक पटक सात दिन मनोवैज्ञानिक परामर्शका लागि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर फेरि सञ्चालन गर्ने भनेकोमा अर्को पटक हुन सकेको छैन ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा खेल गतिविधि सुरु भइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सुरु गरिसकेको छ । भारतमा दोस्रो डिभिजनको फूटबल लिग सुरु भएको छ । यता राखेप सदस्य सचिव सिलवाल भने लण्डन म्याराथनमा दौडनेको संख्या कम गरेको भन्दै बसेका छन् ।
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २ : ४५ बजे